Ebumnuche ihu igwe: ihe niile ị chọrọ ịma | Netwọk Mgbasa Ozi
Ihu igwe nke otu mpaghara bụ usoro nke mgbanwe mgbanwe ihu igwe nke na-eme iji mepụta ọnọdụ gburugburu ebe obibi kpọmkwem. Enwere ọtụtụ ihe ihu igwe na-eme otu oge iji nwee ike inye njirimara ndị a na mpaghara. Ihe ngbanwe nke na - eme ihe abụghị naanị na ọkwa nke ikuku kamakwa ọ na - emetụta ogo niile dị elu site na ụwa. Ekwesiri iburu n'uche na troposphere bu oyi akwa nke ikuku nke mejuputara uwa. N'elu ebe a, enweghi oke esemokwu di n'etiti mpaghara.
N’isiokwu a anyị ga-enyocha ihe bụ njirimara na ihe dị iche iche nke ihu igwe.
1 Mkpa nke ihe ihu igwe
2 Ihe ihu igwe
2.1 Altitude na latitude
2.4 Iru mmiri
2.5 Ikuku ikuku
3 Ihe ihu igwe: igwe ojii, gburugburu ebe obibi nke radieshon
Mkpa nke ihe ihu igwe
Enwere ọtụtụ ndị na-emegharị ihu igwe, ihu igwe. Mgbe anyị na-ekwu maka gbasara ihu igwe, anyị anaghị ekwu maka ihe a maara dịka ihu igwe. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na taa ma ọ bụ echi ọ ga-ezo mmiri, ọ ga-abụ anwụ na-acha, ikuku siri ike, nnukwu okpomọkụ, wdg. Na nke a ihe omuma nke ihu igwe nke puru ime n’oge obula bu ihe anakpo meteorology. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na anyị na-aga n'ihu na-edekọ ihe ndị a gbasara ihu igwe na ụkpụrụ nke mgbanwe ndị dị ebe a emeela ka ihe ndị a pụta oge, anyị ga-enwe ihu igwe nke mpaghara n'ihi ya.
Maka nke a, anyị na-ekwusi ike na ihu igwe bụ nchikota nke mgbanwe ihu igwe nke na-ewere ọnọdụ n'oge na ohere. Ihe mgbanwe niile ndị a na ụkpụrụ ha bụ ihe na-enye njirimara ihu igwe na mpaghara ụfọdụ. Dịka ọmụmaatụ, nkezi okpomọkụ nke dị na mpaghara ụfọdụ nke ụwa bụ akara akụkụ nke ihu igwe a. Enwere ike ịkekọrịta ya dị ka ebe dị ọkụ, nke dị jụụ ma ọ bụ nke oyi na-adabere n'ụkpụrụ okpomọkụ dị elu. Otu ihe atụ kachasị ịtụnanya maka mpaghara anyị bụ ihu igwe Mediterenian. Ejiri ihu igwe a site na ịnwe oke okpomọkụ n'oge ọkọchị na udu mmiri na oyi. Echere m, ụdị ndị a nke ihu igwe mmiri ozuzo na-etinye uche na oge oyi ka oge ọkọchị na-akpọnwụ.
Ọ dị mkpa isonye na data ihu igwe na oke oke ngụkọta site na ụkpụrụ nke mgbanwe ndị mejupụtara ihu igwe. Ihe omuma ndi ozo nke di oke nfe karia ka anaghi eji eme ka onu ogugu a. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mpaghara niile enwere ụkpụrụ dị iche iche nke usoro ikuku, okpomoku, mmiri ozuzo, ụzarị anyanwụ, wdg.
Dị ka anyị kwurula na mbụ, usoro mgbanwe nke ihu igwe bụ ihe na-enye njirimara nke ihu igwe nke otu mpaghara. Ihe ndị a bụ ihu igwe: elu na latitude, udiri ala, mmiri, oke osimiri, okpomoku, mmiri ozuzo, iru mmiri, ikuku ikuku, igwe ojii, ikuku na radieshon. Dịka ị pụrụ ịhụ, enwere ọtụtụ ihe ihu igwe na ụkpụrụ ha nwere ike ịgbanwe na-aga n'ihu. Ihe ndị a niile na-etinye aka n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụghị oke radieshon nke nwere ike ịmetụta mmetụta nke okpomoku dị ka ọnụọgụ nke radieshon nke ruru osisi. Ọchịchọ nke ụzarị anyanwụ bụ ihe na-ekpebi oke radieshon nke ga-abata. Dabere na nke a, pụtara ụkpụrụ okpomọkụ na-guzobere. Nke a bụ ihe kpatara mkpanaka ndị ahụ ji nwee okpomọkụ dịkarịsịrị ala karịa mpaghara ebe ebe okpomọkụ.
Ike nke na-eme ka elu ala na-ekpo ikuku gburugburu ọ bụghị otu na mpaghara ụwa niile. Enwere ike ikwu na ịdị elu na latitude na-emetụta ọtụtụ. Anyị ga-enyocha ihe dị iche iche ihu igwe na etu ha si emetụta njirimara ya.
Altitude na latitude
Dabere na elu nke anyị nọ na latitude anyị ga-amata na ọnọdụ okpomọkụ ga-adị iche na ndị ọzọ na mgbanwe mgbanwe ihu igwe. N'ime mita 100 ọ bụla anyị rịrị elu, ọnọdụ okpomọkụ na-agbadata site na 3 Celsius. Site na ịrị elu a na ugwu anyị na-ahụkwa na nrụgide nke ikuku na-eme yana ọnọdụ okpomọkụ. Ihe mgbanwe abụọ a, dịka okpomoku na ikuku ikuku, na-eme ka ọnọdụ gburugburu ebe obibi nwee mmasị ụdị ndụ ọzọ.
Dịka ọmụmaatụ, enwere nnukwu osisi na ahịhịa nke mepụtara ma gbanwee maka ụdị ịdị elu a. N’ebe ndị a enwere ụkọ nri, obere ahịhịa, ọchịchị ikuku dị elu, wdg. Ndị a bụ ọnọdụ na-anaghị enyere aka mmepe nke ụdị dị iche iche ma ọlị.
Okpomọkụ bụ ihe kachasị agbanwe agbanwe n'ụwa niile. Ọ bụ nke na-eme ka ndụ too nke ọma. Ọnọdụ okpomọkụ ga-enwerịrị uru dị na mpaghara dị mkpa ka ndụ wee nwee ike ịzụlite na ụdị nwere ike iburu ókèala ahụ. Mgbe okpomọkụ agbanwe le emetụta igwe ojii, ifufe, mmiri ozuzo, nrụgide nke ikuku, ọnụọgụ nke radieshon nke rutere elu, Wdg
Nke a pụtara na otu mgbanwe ikuku anaghị enwe uru zuru oke, mana ihe ndị ọzọ na-emetụta ihu igwe ga-emetụta ya.
Achịkọtara ọdịda dị ka isi iyi mmiri na mpaghara yana nri nke iru mmiri gburugburu ebe obibi. N'ihi mmiri ozuzo, ahịhịa nwere ike ito nke ọma yana ya na usoro nri ndị ọzọ. Mmiri na-ada na-adabere na okpomọkụ, ọnụọgụ nke radieshon nke anyanwụ, ígwé ojii, nrụgide nke ikuku, wdg. Dị ka anyị pụrụ ịhụ, ọ dịghị ihe ihu igwe na-adịghị edozi site na nke ọzọ.
Ume mmiri bụ oke nke alụlụ dị na ikuku. Ọ bụ site na usoro mmiri ozuzo nke mpaghara, okpomoku, ikuku, n'etiti ndị ọzọ. Ka oke mmiri ozuzo na mpaghara nwere na ikuku ikuku, ikuku ikuku nwere ike ijigide.
Ọ bụ ike ikuku na-akpa n'ahụ anyị na ụwa. Akọwa ya dị ka ihe ikuku chere. Dịka anyị kwurula na mbụ, ka ị na-arịgo na elu, ikuku nke ikuku pere mpe ma pere mpe.
Ihe ihu igwe: igwe ojii, gburugburu ebe obibi nke radieshon
N'ime ihe anyị na-aga, ihe atọ ndị a na ihu igwe ebe ọ bụ ha bụ ndị na-adịkarị iche na mbara ụwa. Igwe ojii dị na troposphere n’oge ọ bụla bụ mmewere nke ihu igwe nke mmiri ozuzo na-emetụta, ọnụọgụ nke radieshon nke rutere elu na iru mmiri nke gburugburu.
Ifufe bu mmeghari ikuku ma na achoputa ufodu mgbanwe nke ihu igwe dika iru mmiri nke gburugburu ebe obibi, mgbanwe na okpu ikuku ma na enye aka na iku oku nke mmiri. Uzu oku nke mmiri bu otu n’ime ihe di mkpa nke mmiri ozuzo.
Mbara igwe nke anyanwụ bụ otu n’ime mgbanwe ndị nwere ike ịgbanwe nke ukwuu site n’otu mpaghara gaa na mpaghara ọzọ. Ọ bụ nke na-enye onye ọ bụla ala na ikuku na igwe ojii na-ejikarị gas na-ekpo ọkụ.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu ihe gbasara ihu igwe na otu ha si eme ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Climatology » Ihe ihu igwe